अनुहारको कालो दाग हटाउन अण्डाको सेतो भाग, कसरी प्रयोग गर्ने ? | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeचैत ३, २०७५ chat_bubble_outline2
एजेन्सी – अण्डा स्वस्थ्य शरीरको लागि मात्र नभई सुन्दरता बढाउन पनि उत्तिकै फाइदाजनक छ । अण्डाको सेतो भाग अनुहारको सुन्दरताको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अनुहारको धेरै समस्याको समाधान गर्ने छालामा भएका कालो दागलाई हटाएर सफा बनाउन मद्दत गर्छ । छालामा हुने जलन कम गर्नको लागि पनि अण्डाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अण्डाको सेतो भागको फाइदा
कालो दाग हटाउन
विभिन्न प्रकारका कस्मेटिकको प्रयोगले गर्दा आजभोलि हरेकको समस्या भएको छ कालो दाग (ब्लाकहेड्स) । अनुहारमा आउने कालो धब्बा लामो समयसम्म नजाँदा धेरैलाई हैरान बनाएको पाइन्छ । जसको लागि अण्डाको सेतो भागको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अनुहारको रौं हटाउन
अण्डाको सेतो भाग लगाउँदा अनुहारमा आएका अनावश्यक रौं हट्दै जान्छ । यसले अनावश्यक रौं हटाउनुका साथै छालालाई कसिलो बनाउन पनि मद्दत गर्छ ।
चिप्लो छालाको लागि
अनुहारमा भएका खुल्ला छिद्रहरु पुर्न अण्डाको सेतो भागको प्रयोग उचित हुन्छ । साथै यसले अनुहारमा भएको अनावश्यक फोहोरको पनि सफाई गर्छ । अण्डाको सेतो भाग अनुहारमा लगाएर चिसो पानीले धुने गर्दा अनुहारमा आउँने अनावश्यक तैलियपन कम गराउँछ ।
अण्डाको सेतो भाग र मह
अण्डाको सेतो भागमा मह मिसाएर पेस्ट बनाउँने र ब्रसले उक्त पेस्ट दुई तीनपटक लगाएपछि २० मिनेटपछि धुने । यो प्रक्रिया हप्तैपिच्छे गर्दा छालामा सुन्दरता बढ्दै जान्छ ।
बेकिङ सोडा र अण्डाको सेतो भाग
कालो धब्बा हटाउनको लागि २ चम्चा बेकिङ सोडामा एउटा अण्डाको सेतो भाग मिसाउने र पेस्ट बनाउने । लगाएको ५ मिनेटसम्म विस्तारै मसाज गर्ने र १० मिनेटपछि पानीले पखाल्ने ।
चिनीको स्क्रब र अण्डाको सेतो भाग
एक चम्चा चिनीमा दुई वटा अण्डाको सेतो भाग मिसाउने र अनुहारमा लगाएर सर्कुलर मोसनमा बिस्तारै मसाज गर्ने १० मिनेट पछि मिच्न छोड्ने र पानीले पखाल्ने ।
Nov. 23, 2019, 9:35 a.m. padamyogi
Anuharko kalo dag hataune upaya dinu hos ok ????
Nov. 23, 2019, 9:33 a.m. padamyogi
Anuharko kalo dag ???